TAARIIKH: Kadib Saddexleydii Layaabka Lahayd Ee Lionel Messi, Halkan Kaga Bogo Xogta Cajiibka Ah Iyo Qaabkii Uu Ku Gaadhay Saddexleydiisii 50 Aad. – XAMAR POST
TAARIIKH: Kadib Saddexleydii Layaabka Lahayd Ee Lionel Messi, Halkan Kaga Bogo Xogta Cajiibka Ah Iyo Qaabkii Uu Ku Gaadhay Saddexleydiisii 50 Aad.
By Zakariye iiman On Feb 23, 2019
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa bandhig layaableh ka sameeyay kulankii Sevilla ee ay kooxdiisu guusha 4-2 ahayd ku soo xasuuqday kooxda Sevilla oo ay dhibaato badan kala kulmeen qaybtii hore laakiin Messi ayaa muujiyay in uu yahay xidig inta uu garoonka ku jiro aanu Valverde walwal badan qabin.
Sevilla ayaa gool kaga hor martay Barcelona laakiin Lionel Messi ayaa gool cajiib ah kubbad duulaysa Barca ugu keenay goolka barbaraha laakiin Sevilla ayaa qaybtii hore ee ciyaarta hogaanka ku haysay 2-1 balse Lionel Messi ayaa qaybtii labaad dhalyay gool kale oo qurux badan kadib markii uu difaaca iyo goolhayaha Sevilla ku indho sarcaaday kubbad uu lugta midig si cajiib ah ugu darbeeyay.
Jamaahiirta Barcelona ayaa markiiba bilaabay in ay Pele xusuusiyaan in uu ku qaldanaa hadalkii uu ku sheegay in Messi uu yahay ciyaartoy hal xirfad oo kaliya leh oo ah in uu lugta bidix wax ku qaban karo balse goolka uu Messi lugta midig ku dhaliyay ayaaba ahaa gool aan hore looga baran.
Inkasta oo uu Lionel Messi ayaa xidiga laba jeer kooxdiisa Barcelona barbaraha u keenay waxa uu ugu danbayn noqday xidiga natiijada ciyaarta gabi ahaanba dhinaca kale u dhigay kadib markii uu kubbad jaqaf ah ka dul qaaday goolhayaha uu ceebeeyay ee kooxda Sevilla si uu u dhamaystiro saddexleyda uu kulankan ka dhaliyay.
Laakiin Lionel Messi ayaa markale gool caawin u sameeyay Luis Suarez kaas oo goolka afraad ee kooxdiisa Barcelona ciyaarta ku soo xidhay, waxayna Barca hogaanka La Liga ku sii qabtay 10 dhibcood laakiin Messi ayaa taariikh cusub loo diwaan galiyay.
Lionel Messi ayaa dhaliyay saddexleydiisii 50 aad ee waayihiisa ciyaareed taas oo la micno ah in 50 kulan uu min saddex gool ama ka badan soo dhaliyay. Lionel Messi ayaa 32 saddexley ka soo dhaliyay horyaalka La liga, wuxuuna 3 jeer saddexley ka soo dhaliyay Copa Del Rey.
Laakiin Lionel Messi ayaa 8 saddexley ka soo dhaliyay UEFA Champions league halka uu Spanish Super Cupka uu hal saddexley ka soo dhaliyay waxayna la micno tahay in 44 saddexley uu u soo dhaliyay kooxdiisa Barcelona.
Lionel Messi ayaa xulka qarankiisa Argentina u soo dhaliyay 6 saddexley wuxuuna saddexleydii kulankii Sevilla uu ku gaadhay in isku darka xulkiisa Argentina iyo kooxdiisa Barca uu u soo dhaliyay 50 saddexley.
Lionel Messi ayaa sii dheeraystay gool dhalinta horyaalka La Liga iyo tartanka kabta dahabka ah ee gool dhalinta Yurub isaga oo 25 gool ka soo dhaliyay 25 kulan oo La Liga ah wuxuuna sidoo kale soo sameeyay 11 gool caawin taas oo la micno ah in haddaba uu 36 gool ku soo lug yeeshay oo La liga ah.
Laga soo bilaabo bishii December, Lionel Messi ayaa soo joogteeyay in celcelis ahaan uu kulankiiba ku soo lug yeeshay 2 gool isaga oo 11 kulan ku soo dhaliyay 16 gool isla markaana 6 gool caawin soo sameeyay.
Sidii Lionel Messi Ku Soo Gaadhay 50 ka Saddexley Ee Uu Soo Dhaliyay?
Sawirka hoose ayaad si buuxda ugaga bogan kartaa wax walba oo ku saabsan xogta 50 kii saddexley ee uu Lionel Messi soo dhaliyay waxaana sida aad arki karto uu saddexleyda ugu badan oo 4 ah uu ka soo dhaliyay kooxda Valencia.
Lionel Messi ayaa min 3 saddexley ka soo dhaliyay kooxaha Sevilla, Atletico Madrid, Deportivo, Espanyol iyo Osasuna halka shan kooxood oo ay Real Madrid ku jirto uu min 2 saddexley ka soo dhaliyay. Lionel Messi ayaa hal saddexley u jira rekoodhka Cristaino Ronaldo uu ku haysto 51ka saddexley.
Lionel Messi ayaa 50 ka saddexley ee uu soo dhaliyay waxa uu ku soo dhaliyay 157 kulan wuxuuna saddexleyda ugu badan soo dhaliyay sanadkii uu buuga dhacdooyinka layaabka leh ee aduunka galay ee 2012 kii markaas oo uu 9 jeer saddexley dhaliyay waana sababtii uu 91 gool u soo dhaliyay hal sano.
Halkan hoose kaga bogo sawirka soo koobaya xogta Lionel Messi ee 50 ka saddexley ee uu soo dhaliyay.
Barcelona ayaa guuldaro xun kala soo laaban lahayd Sevilla haddii aanu Lionel Messi qaadan lahayn mid ka mid ah kulamadiisii ugu fiicnaa ee xili ciyaareedkan wuxuuna awooday in uu dhinaca kale u dhigay labadii gool ee ay Sevilla min hal mar hogaanka ku haysay halka uu Suarez u sameeyay goolka uu kalsoonidiisiii ku soo ceshaday.